အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော် – UK Parliament – II | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Community & Society » အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော် – UK Parliament – II
အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော် – UK Parliament – II
Posted by Kyaemon on Sep 22, 2012 in Community & Society, History, Photography, Society & Lifestyle, Style & Beauty, Travel |3comments
ဒေါ်စုရောက်ခဲ့တဲ့ အင်ဂလန် ပါလီမန်လွှတ်တော်ကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်
ပါလီမန်လွှတ်တော်ကို Westminster နန်းတော် လို့လဲခေါ်တာပါ
ညရှူခင်းလဲ လှပ ခန့်ညားတာပါ
Parliamentary estate –aset on Flickr
Thames မြစ်ပေါ်က တံတားနဲ့ကမ်ဘာကျော် Big Ben နာရီစင် လဲ ပါဝင်တာ
Slideshow ဆလိုက်ရှိုးကြည့်ဘို့ link လင့်ခ ကိုနှိပ်ပါ
ILLUSTRATION OF WESTMINSTER PALACE
Westminster နန်းတော်ကို ပုံပန်းချီတွေ နဲ့အသေးစိတ်ရှင်းပြထားတာ
Big Ben နာရီမျှော်စင်ကြီး
အောက်လွှတ်တော်အမတ် စည်းဝေးရာသီးသန့်ပါလီမန် ခန်းမကြီး
The official guide to the Palace of Westminster –aset on Flickr
The official guide to the Palace of Westminster
Parliament of England – Wikipedia, the free encyclopedia
အင်ဂလန် (ပြည်မ) ပါလီမန် ကိုဝီးကီး စွယ်စုံကျမ်းကရှင်းပြတာ၊
၁၀၆၆ တုန်းက William of Normandy ဘုရင်က ပဒေသရစ်စံနစ်ကိုစတင်တည်ထောင်ကာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရာမှာ
ပဒေသရစ် မြို့စားတွေ နဲ့ဘုန်းကြီးအကြီးပိုင်းတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးမှဥပဒေထုတ်ပြန်တာ၊
၁၂၁၅ ကျတော့ ဒီမြို့စားပဒေသရစ်တွေက John ဘုရင်ကိုအကြပ်ကိုင်ကာ
Magna Carta သဘောတူစာချုပ်ကိုအတင်းလက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပြီး ဘုရင်ထံမှ ပဋိညာဉ်ဂတိကိုအရယူနိုင်ခဲ့တာ၊
ဘုရင်ရဲ့အကြံပေးကောင်းစီကသဘောတူပြီးမှသာလျှင် ဘုရင်က အခွန်သစ် တွေကိုကောက်နိုင်ပါ့မယ်ဆိုတဲ့ဂတိပါ၊
(လက်လွတ်စပယ်အခွန်ကောက်ခဲ့လို့)(ရာတန်ငါးဆယ်တန် ၄၅ကျပ်တန် ၉၀ တန်ငွေစက်ကူဖျက်သိမ်းသလို ခပ်ဆင်ဆင်ပါ)
ဒီလိုနဲ့ဒီကောင်စီ (Royal Council) တို့ကနောင်ပါလီမန်ဖြစ်လာတာ
The Parliament of England was the legislature of the Kingdom of England. In 1066, William of Normandy introducedafeudal system, by which he sought the advice ofacouncil of tenants-in-chief and ecclesiastics before making laws. In 1215, the tenants-in-chief secured Magna Carta from King John, which established that the king may not levy or collect any taxes (except the feudal taxes to which they were hitherto accustomed), save with the consent of his royal council, which gradually developed intoaparliament.
နှစ်ပေါင်းရာချီအတွင်းမှာ ဘုရင်ရဲ့အာဏာကိုပိုပိုပြီးကန့်သတ် လာတာနောက်ဆုံးမှာ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး Charles I ဘုရင်ကို ၁၆၄၉ တွင် ခုံရုံးတင်ကာ ကွပ်မြက် လိုက်သည်အထိဖြစ်ခဲ့တာ၊
Over the centuries, the English Parliament progressively limited the power of the English monarchy which arguably culminated in the English Civil War and the trial and execution of Charles I in 1649. After the restoration of the monarchy under Charles II, the supremacy of parliament wasasettled principle and all future English and later British sovereigns were restricted to the role of constitutional monarchs with limited executive authority. The Act of Union 1707 merged the English Parliament with the Parliament of Scotland to form the Parliament of Great Britain. When the Parliament of Ireland was abolished in 1801, its former members were merged into what was now called the Parliament of the United Kingdom…..
Henry II ဘုရင်နဲ့ Canterbury ဘုန်းကြီးဂိုင်းချုပ် Beckett တို့က စကားများကြတာ
တော်တော်ကြာကြာ ခဲ့ပြီး ၁၁၇၀ မှာ ဘုန်းကြီးကိုလုပ်ကြံခဲ့တာ၊
John ဘုရင်ကမြို့စားတွေကိုရန်ပြုလို့ ၁၂၁၅ ခုနှစ်တွင် မြို့စားတွေက John ဘုရင်အား Magna Carta စာချုပ်ကို
John ဘုရင်က ဂတိမတည် စာချုပ်မလိုက်နာလို့ First Barons’ War ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ခဲ့တာ
(အာဏာလု၊ လူသတ်၊ ပြည်တွင်းစစ်တွေဖြစ်ခဲ့လို့ အင်ဂလန်လဲ ရာဇဝင်ခရီးကြမ်းကို နင်းလာခဲ့တာ)
Becket, who was Archbishop of Canterbury between 1162 and 1170, was murdered followingalong running dispute with Henry II over the jurisdiction of the Church. John, who was king from 1199 to 1216, aroused such hostility from many leading nobles that they forced him to agree to Magna Carta in 1215. John’s refusal to adhere to this charter led to civil war (see First Barons’ War).
ပါလီမန်ဆိုတာပြင်သစ်စကားမှဆင်းသက်လာပြီး ဆွေးနွေးခြင်း နဲ့ စကားပြောခြင်း ကိုဆိုလိုတာ
The Great Council evolved into the Parliament of England. The term itself came into use during the early 13th century, deriving from the Latin and French words for discussion and speaking. The word first appears in official documents in the 1230s. ….
Parliament of the United Kingdom – Wikipedia, the free encyclopedia
British Parliament at twilight | Flickr – Photo Sharing!
British Parliament at night III | Flickr – Photo Sharing!
၁၈၃၄ တုန်းက ပါလီမန်အဆောက်အဦးဟာ အကြီးအကျယ် မီးလောင်ပျက်စီးခဲ့တာ
The Great Fire of 1834 –aset on Flickr
ဘုရင်မ ကလာပြီး မိန့်ခွန်းမပေးမီ ပါလီမန်အစောင့်တပ်တို့က လိုက်လံစစ်ဆေးခြင်းကို
ရှေးထုံးစဉ်လာအတိုင်း မီးအိမ်တွေကိုယ်စီကိုင်ပြီး စီတန်းကာ
လေးလေးနက်နက်စစ်ဆေးနေသယောင် “ဟန်ရေးပြ” နေတာ
Flickr: Search The British Monarchy’s photostream
Search results for yeomen
ကိုယ်တိုင်ရောက်လို့ အောက်ကနေအထက်သို့ မိမိ ကိုယ်တိုင်ကမော့ ကြည့်လိုက်သလိုဘဲ၊
Flickr: Search GunGeekATX’s photostream
Search results for british parliament
Richard the Lion Heart ဆိုတဲ့ဘုရင် ရဲ့ပုံ
မမကြေးမုံနဲ့ ဦးကြောင်က သမီးရီးဂျားတွေလားဟင်…။
အဟီး… အကောင့်နှစ်ခု အဝင်အထွက် ရှုပ်သွားလို့ ခွေးလွှတ်ပါ။ အပေါ်မှာရေးထားတာ ကြေးမုံဂျီးဆိုသူ မေးခိုင်းတယ်လို့ ပြောင်းမှတ်ပေးနော်..။